ချစ်တင်းနှောစဉ် အမျိုသမီးတွေဆီကနေ အမျိုသားတွေ အကြားချင်ဆုံးစကား(၄)ခွန်း
ချစ်တင်းနှောတယ်ဆိုတာ အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ ဘယ်လိုမှ ကင်းလို့မရတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အိမ်ထောင်တစ်ခု သာယာခြင်း မသာယာခြင်းဆိုတာ အဲဒီကိစ္စပေါ်မှာ မူတည်နေပြီး၊ ပိုပြီး လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ချစ်ရေးချစ်ရာကိစ္စကို အာရှနိုင်ငံတွေထက် ပိုပြီး လွတ်လပ်စွာ ဖော်ကျူးကြပါတယ်။
အခု ဖော်ပြထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို DailyStar သတင်းစာက ဖော်ပြထားတာကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကိုးကားဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်တင်းနှောတဲ့အခါ လူတိုင်းမှာ အာသီသ အမျိုးမျိုးရှိကြပြီး၊ တစ်ချို့ကလည်း အနေအထားနဲ့ပတ်သက်လို့ အမျိုးမျိုး အာသီသ ရှိကြသလို၊
တစ်ချိုကကျတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ပြောတဲ့အာလုပ်စကားတွေကို အရေးထားကြပါတယ်။ ဆိုရရင် ချစ်တင်းနှောနေစဉ်မှာ ပါးစပ်ကနေ တွတ်တီးတွတ်တာ ထွက်လာတဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း စကားလုံးတွေကို သာယာကြတဲ့ သဘောပါ။ အထူးသဖြင့် အဲဒီလို ခပ်ကြမ်းကြမ်း စကားလုံးတွေကို အမျိုးသားတွေက ပိုသဘောကျပါသတဲ့။
DailyStar က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းမှာ ချစ်တင်းနှောနေစဉ် အမျိုးသားတွေအများစု မက်မောတွယ်တာတဲ့ ညစ်ညမ်းစကားလုံးတွေကတော့ (၄)မျိုးအထိရှိပြီး၊ အဲဒီ(၄)မျိုးကို ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ကြားချင်တယ်ဆိုတာကို အမျိုးသားထုကြီးထံ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း အသီးသီးရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။
1 . That feels good – 29%
2 . I want you – 26%
3 . You’re so big – 23%
4 . Please don’t stop – 23%
တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရရင် That feels good (ကောင်းလိုက်တာ)ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အမျိုးသားအများစု အကြားချင်ဆုံးစကားလုံးဖြစ်ပြီး၊ I want you (ကျွန်မ ရှင့်ကို လိုအပ်တယ်)က (၂၆)%ဖြင့် ဒုတိယနေရာ၊ You’re so big (အကြီးကြီးပဲ)ဆိုတာက (၂၃)%၊ Please don’t stop (မရပ်လိုက်နဲ့)ဆိုတာက (၂၃)% အသီးသီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ချစ်တင်းနှောစဉ်အကြားချင်ဆုံးစကား ၄ ခွန်းအမျိုသမီးတွေဆီကနေအမျိုသားတွေ